Ohatra, tokony hifanaraka amin’ny tantara napetraky ny teo aloha, ny toetra jeografika, ny fizaran’ny toetrandro, ny endri-pifandraisana eo anivon’ny samy vondrom-paritra … ny fizaram-paritra misy. Amin`izay, tsy maintsy mandray an-tanana ny fampandrosoana ny vondrom-paritra sy ny lafin-tany misy azy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny manomboka amin’ny olom-boafidy izany fa tsy hionona amin’ny famatsiam-bola sy fanampian’ny fitondrana foibe mpanelanelana sy manamora ny fiaraha-miombon’antoka heverin’ny Faritra fa hampahomby ny ezaka fampandrosoana ataony. Mila mametraka fomba fijery tsy mitanila ny fitondrana foibe amin’ireo asa sy fampitaovana ny vondrom-paritra ary hanome koa ny herijikin’ny isam-paritra amin’ny tena fampandrosoana mifanaraka amin’ny filan’ilay Faritra na lafin-tany mihitsy. Mahakasika ny toe-bola tena ilain’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana mba hifanaraka amin’ny filan’ny vondrom-paritra tsirairay dia tokony hapetraka eo anivon’ny andrim-panjakana mpanao lalàna ny fandinihana izany satria ny famatsiam-bola sy ny fampitaovana ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana no fototra sy fanoitra lehibe hampandrosoana azy ireo ary tokony hatao vaindoham-piniavan’ny mpitondra izany. Mila hatsaraina ny vovonan’ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahefana (intercommunalité) mba hampirindra ny tetika sy hevitra hitondrana ny tena fampivoarana satria moramora kokoa ny mampivondrona ny fomba fijery ao anatin’ny faritra na lafin-tany ka mitovitovy ny toe-tany sy ny zava-bita. Mbola betsaka ny ezaka atao raha te hametraka ny fitsinjaram-pahefana mifototra amin’ny fampandrosoana sy ny demokrasia isika, mitaky finiavana avy amin’ny rehetra na olon’ny fitondrana na olom-boafidy na mpandraharaha na mpamatsy vola, indrindra ny vahoaka hiantefany. Ny fahaizan’ny mpitondra sy tompon’andraikitra eo amin’ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana mifehy ny fampidiran-ketra eo aminy dia fomba iray mitarika ho amin’ny fananan’ilay vondrom-paritra fahavitan-tena eo amin’ny fitantanana sy ny fampandehanana ny rafitra misy.